Business Intelligence Solution ဆီသို့ လျှောက်လှမ်းချိန်တန်ပြီလား - Vanguard
Home » Business Intelligence Solution ဆီသို့ လျှောက်လှမ်းချိန်တန်ပြီလား
Posted by Vanguard on June 19, 2019 .
သင့်လုပ်ငန်းဟာလည်း တခြားလုပ်ငန်းအများစုလိုပင် ဗျူဟာမြောက်တဲ့လုပ်ငန်းဖြစ်ပြီး မှန်ကန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကို ချမှတ်ချင်တယ်ဆိုပါစို့။ ဒါ့အပြင် အဲဒီလိုဗျူဟာမြောက်ပြီး ဆုံးဖြတ်ချက်ကောင်းကောင်းချနိုင်လောက်စရာ DATA အချက် အလက်တွေကိုလည်း ပိုင်ဆိုင်ထားတယ်ဆိုပါစို့။ ဒါပေမယ့် ဒီအချက်အလက်တွေကို ဘယ်လိုကိုင်တွယ် ထိန်းသိမ်းမလဲ၊ ဘယ် Tool က အထိရောက်ဆုံးဖြစ်မလဲဆိုတာ တွေးရခက်နေပြီလား။ ဒါဆိုရင်တော့ Business Intelligence Solution (BI) ရှိပါတယ်။
Business Intelligence (BI) ဟာဆိုရင် နေ့စဉ်နှင့်အမျှ များပြားပြောင်းလဲလာတဲ့ Data အချက်အလက်တွေကို တိကျ မှန်ကန်စွာခွဲခြမ်းသုံးသပ်နိုင်ခြင်း၊ လုပ်ငန်းရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေကို တိုးတက်ကောင်းမွန်လာစေနိုင်ခြင်းများအပြင် ရလဒ် ကောင်းတွေကို ပေးစွမ်းနိုင်တဲ့ application တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။
သင့်လုပ်ငန်းဟာ Business Intelligence ကို အသုံးပြုဖို့ လိုအပ်နေပြီလား
အခုဖော်ပြမယ့်အချက်တွေကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့် လုပ်ငန်းတစ်ခုမှာ လိုအပ်တဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေနှင့် လုပ်ငန်း အတွက် ဘယ်လိုအခွင့်အလမ်းကောင်းတွေရရှိမလဲဆိုတာကို သုံးသပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
လုပ်ငန်းတစ်ခုမှာ Data အများကြီးရှိထားပေမယ့် သတင်းအချက်အလက်တွေကတော့ အလုံအလောက်မရှိခြင်း။ ဥပမာ အားဖြင့် Product တစ်ခုစီတိုင်းအတွက် နေ့စဉ်အရောင်းစာရင်းတွေ၊ Customer တွေရဲ့ invoice တွေက DATAဖြစ်ပြီးတော့ Customer တွေရဲ့ ဝယ်လိုအား အကြိုက်တွေ၊ ကုန်ပစ္စည်းအပေါ် အမြတ်အစွန်းအရ ခြုံငုံသုံးသပ်မှု အစရှိတာတွေကတော့ သတင်းအချက်အလက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Data ချည်းသက်သက်ရှိနေခြင်းထက် သတင်းအချက်အလက်တွေပါရှိထားခြင်းက သင့်လုပ်ငန်းကို ပိုမိုပြီးပြည့်စုံစေမှာဖြစ်ပါတယ်။
Purpose-built software solution အသုံးမပြုဘဲ လုပ်ငန်းDATAတွေကနေ Report ထုတ်ခြင်းဟာ မလွယ်ကူလှပါဘူး။ Report များများထုတ်ရလေ DATAများများပိုလိုလာလေဖြစ်ပြီးတော့ IT team အနေနဲ့လည်း သင့်လိုအပ်ချက်ကို အမီ လိုက်ဖို့ ခက်ခဲလေလေဖြစ်မှာပါပဲ။
လုပ်ငန်းအတော်များများက သူတို့ရဲ့ DATAတွေကို ထိန်းသိမ်းဖို့နဲ့ ပိုင်းခြားစိတ်ဖြာဖို့အတွက် Excel ဒါမှမဟုတ် တခြား Spreadsheet application တွေကို အသုံးပြုလေ့ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ထိန်းသိမ်းစရာ Data တွေ၊ ဖိုင်တွေများလာတာနဲ့အမျှ ဒီသာမန် spreadsheet software တွေနဲ့ဆိုရင် စီမံခန့်ခွဲရအဆင်မပြေမှုတွေဖြစ်လာနိုင်ပါ တယ်။ ဒါကြောင့် Data တွေကို အသေးငယ်ဆုံးအထိ ချုံ့ထားလိုက်နိုင်တဲ့နည်းလမ်းဟာ လုပ်ငန်းတစ်ခုအတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်စေမှာပါ။
မတူကွဲပြားတဲ့ Data Source တွေက Data တွေကို ပေါင်းစပ်ခြင်းဟာ ရှုပ်ထွေးစေပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့် အလုပ် သဘောချင်း ဆင်တူပေမယ့် သုံးတဲ့ Format ချင်း မတူကြတဲ့ HR နဲ့ Finance ရဲ့ spreadsheet တွေကို ပေါင်းပြီး လေ့လာသုံးသပ်မှုတွေလုပ်ဖို့ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။
DATAမှ Insight သို့ပြောင်းလဲပုံ အဆင့် (၄)ဆင့်။
ယေဘုယျအားဖြင့်လည်း ရှုပ်ထွေးလွန်းတဲ့ Data တွေကို business intelligence system တွေထဲ ထည့်လိုက်ရုံနဲု့တော့ ရလဒ်ကောင်းတွေထွက်လာမှာမဟုတ်ပါဘူး။ အသုံးဝင်တဲ့ BI dashboards တွေ၊ Report တွေရဖို့ဆိုရင်တော့ မဖြစ်မနေ လုပ်ဆောင်ရမယ့် အချက် (၄) ချက်ရှိပါတယ်။
(၁) မတူကွဲပြားတဲ့Data အရင်းမြစ်များနှင့် ချိတ်ဆက်ခြင်း။
သင့်ရဲ့ Data တွေကို Data စင်တာထဲမှာ၊ Cloud ထဲမှာ ဒါမှမဟုတ် တခြား Database ထဲမှာ စသဖြင့် မတူညီတဲ့ နေရာ အသီးသီးမှာ သိမ်းဆည်းထားကောင်း ထားမှာပါ။ ဒါကြောင့် ပြန်အသုံးပြုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ မတူညီတဲ့ ဒီနေရာ အရင်းအမြစ်အသီးသီးကို ချိတ်ဆက်မှုတွေ သေချာပေါက်ပြုလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
(၂) Data source ထုတ်ယူခြင်း၊ အသွင်ပြောင်းခြင်းနှင့် ထည့်သွင်းခြင်း။
အဓိက ပန်းတိုင်ကတော့ မတူညီတဲ့အရင်းမြစ်အသီးသီးက Data တွေကို တစ်နေရာတည်းမှာ သဟဇာတဖြစ်အောင် ပေါင်း စည်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။
(၃) သုံးစွဲသူမေးခွန်းများကို အခြေခံပြီး Data ပြန်လည်ထုတ်ယူခြင်း။
ကြိုတင်သတ်မှတ်ပြီးသားမေးခွန်းမျိုးဖြစ်ဖြစ် ကြုံရာကျပန်းမေးခွန်းတွေဖြစ်ဖြစ် သုံးစွဲသူတွေဆီက လာသမျှမေးခွန်းတွေကို အလျင်မြန်ဆုံးနှင့် အတိကျဆုံးပြန်လည် ဖြေဆိုပေးနိုင်ဖို့လိုပါတယ်။
(၄) Data visualization
User တွေရဲ့ လိုအပ်ချက်တွေ၊ အကြိုက်တွေအရ အသုံးပြုနိုင်အောင်လို့ Data visualization ကို ပြနိုင်ဖို့လိုပါတယ်။
ရှုပ်ထွေးများပြားတဲ့ DATAတွေကို ကောင်းမွန်စွာကိုင်တွယ်ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့အတွက် သင့်တော်တဲ့ Business intelligence solution ရှိထားဖို့လိုပါတယ်။ သင့်လုပ်ငန်းရဲ့ Data တွေကို နားလည်သဘောပေါက်နေခြင်းနှင့် မှန်ကန်စွာ တွက်ချက်နိုင်. ခြင်းတွေက ယခုအတွက်သာမက နောင်အနာဂတ်အတွက် အလားအလာကောင်းတွေကိုပါ သယ်ဆောင်လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သင့်လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်၊ သုံးစွဲနိုင်တဲ့ ငွေပမာဏတွေနှင့် အကိုက်ညီဆုံး Business intelligence solution ကို ဆုံးဖြတ်ရွေးချယ်နိုင်ဖို့က အရေးကြီးဆုံးပါပဲ။